UN Security Council finally losing patience with Myanmar
by rightsforburma | Sep 29, 2017 | English, NEWS
United Nations (CNN) In the past four weeks over halfamillion Rohingya Muslims have been forced to flee Myanmar to escape an orchestrated campaign of violence described by the UN as “ethnic cleansing.”
But it wasn’t until Thursday that the UN Security Council held its first public meeting on the situation in more than eight years.
UN Secretary-General Antonio Guterres told the council that the current outbreak of violence has “spiraled into the world’s fastest-developing refugee emergency,ahumanitarian and human rights nightmare.”
At least 500,000 Rohingya have fled Myanmar since violence intensified in late August, bringing with them stories of widespread destruction and murder in their home province.
Their forced migration constitutes the quickest exodus fromasingle country since the Rwandan genocide in 1994.
On August 25, Rohingya militants killed 12 security officers in coordinated attacks on border posts, according to Myanmar’s state media. In response, the military intensified “clearance operations” against “terrorists,” driving thousands of people from their homes.
he security council meeting came as 15 Rohingya, including nine children, drowned after their boat sunk while trying to escape Myanmar to Bangladesh across the Bay of Bengal.
US ambassador to the United Nations told the Security Council Thursday Myanmar’s actions in Rakhine State appeared to be ethnic cleansing, an allegation UN human rights chief Zeid Raad al-Hussein first made weeks ago.
The government of Myanmar has repeatedly denied this, claiming security forces are carrying out counter attacks against “brutal acts of terrorism.”
Inastatement, the country’s foreign ministry claimed that security forces are taking “full measures to avoid collateral damage and the harming of innocent civilians.”
Visiting Myanmar National Security Advisor U Thaung Tun blamed terrorism, not religious persecution, for the unfolding crisis. He said there is “no ethnic cleansing or genocide” in Myanmar, adding that those charges should not be lobbed lightly.
Despite the harsh words no formal action was taken after the session. Ambassadors said they felt that the 15-member council sentastrong message to Myanmar.
Haley: Time for words has passed
During Thursday’s meeting, Ambassador Haley said the time for “well meaning words in the Council have passed.”
She said that action must be considered against “Burmese security forces who are implicated in abuses stoking hatred among fellow citizens,” and urged countries that now sell weapons to Myanmar to suspend their deliveries until the military provides accountability.
Haley called for the Myanmar military to respect human rights and fundamental freedoms.
Before the meeting, Amnesty International called for an arms embargo on Myanmar. The group says Myanmar has torched entire villages inside Rakhine State and fired on people trying to flee.
Myanmar issued an invitation to the UN Secretary-General to come visit the country in the “near future.” The UN said that it’s studying the offer.
The Myanmar envoy also said diplomats accompanied by media will visit northern Rakhine state on Monday.
The UN does not have its own army, and it has gotten nowhere with pleas for diplomacy. A UN team set to tour Rakhine state on Thursday found its trip cancelled — due to the weather, according to Myanmar.
Guterres: ‘End the military operations’
The UN Secretary-General proposed three things for the Myanmar government to do.
“First, end the military operations,” Guterres said. “Second, allow unfettered access for humanitarian support. And third, to ensure the safe voluntary and sustainable return of the refugees to their areas of origin.”
Japan’s UN Ambassador Koro Bessho strongly condemned the attacks on civilians and said his nation was deeply disturbed at reports of killings.
Myanmar’s special envoy told the Council the country realizes the humanitarian situation needs to be addressed. He said thousands fled because of fear due to terrorism, and that Myanmar is cooperating with the Red Cross.
The UN Secretary-General warned that “we should not be surprised if decades of discrimination and double standards in treatment of the Rohingya create an opening for radicalization.”
China,aneighbor of Myanmar and Bangladesh where hundreds of thousands have fled, said “there is no quick fix” to the conflict.
Diplomats say they wantapolitical dialogue to start. The Council plans to hear from former UN Secretary-General Kofi Annan, who chairedacommission on Myanmar packed with recommendations, next week.
Swedish UN Ambassador Olof Skoog said the Annan report “provides the way forward,” as he urged the Myanmar government to take responsibility to bring an end to the conflict once and for all.”
CNN’s Ben Westcott and Karen Smith contributed to this report.
by rightsforburma | Sep 29, 2017 | Myanmar, NEWS
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေအရပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ စက်တင်ဘာ လ ၂၈ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့က တံခါးဖွင့်အစည်းအဝေးတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးအတွင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကောင်စီကို အစီရင်ခံတင်ပြသလို လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း တောင်းဆိုတာတွေကို အသီးသီးပြောသွားကြပါတယ်။ ဒီပြောဆိုချက်တချို့ကို ကောက်နုတ်စုစည်းပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်ပြောပြပါမယ်။
မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးအဖွင့်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres က အရင်ဆုံး အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့ထဲ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ Arakan Rohingya Salvation Army က မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကတည်းကဆိုရင် လက်ရှိအခြေအနေဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ယိုယွင်းလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကို သူ့အနေနဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတာ ထပ်ပြီး ပြောသွားပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကတည်းကစလို့ ဒုက္ခသည်အရေးပေါ်အခြေအနေ၊ လူသားဘေးဒုက္ခနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေ တခုအဖြစ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလျင်မြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ထောက်ပြပါတယ်။ အဲဒီ နောက် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုကို ချက်ခြင်းလက်ငင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ သူက တောင်းဆိုသွားပါတယ်။
“မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဒီခြေလှမ်း၃ ရပ်ကို ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနောဆက်လက်တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပထမက စစ်ဆင်ရေးတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့၊ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူတွေကို အဟန့်အတားကင်းရှင်းစွာ ပေးနိုင်ခွင့်ပြုဖို့ ၊ တတိယက ဒုက္ခသည်တွေကို ဘေးကင်းစွာ မိမိတို့သဘောအလျောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်တွေ ပေးပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ နေရင်းအရပ်တွေကို ပြန်ခွင့်ရရေး အာမခံဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။”
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် Jonathan Allen က မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာမှာ သမိုင်းအမှန်ဘက်က ရပ်တည်ပြီး ဖြေရှင်းမလား၊ လုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးယူလုပ်ဆောင်တာကို ရင်ဆိုင်မလားဆိုတာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို မေးခွန်းထုတ်သွားပါတယ်။
“ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးအကျိုးကို အလေးထားဖို့ သန္နိဌာန် ခိုင်မာပါ တယ်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အောင်မြင်စေချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ဒီနေ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပဲ တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပဋိပက္ခဟာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအပြင် မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် အရိပ်မဲကြီး ထင်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သမိုင်းမှာ ဘယ်လို ရပ်တည်မလဲဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်ပေးကြရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ။”
“အကြမ်းဖက်မှုကို အဆုံးသတ်ပြီး အရပ်သားတွေကို အကာကွယ်ပေးတာ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်မလား လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူကို ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို အကူအညီပေးခွင့်ပြုမလား။ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ရင်းပြန်နိုင်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလား၊ လက်ရှိပြဿနာ အဖြေရှာဖို့ ကိုဖီအာနန်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်တွေကို လိုက်နာမလား … ဒီအချက်တွေကို ဖေါ်ဆောင်ဖို့ ငြင်းနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လမ်းမှားဘက်မှာ ရပ်တည်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် သမိုင်းအတင်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ခဲ့ရင် လုံခြုံရေး ကောင်စီအနေနဲ့ ဆက်လက်အရေးယူဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ရပါမယ်။”
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley ကတော့ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အရေး ယူဖို့၊ မြန်မာစစ်ဘက်ကို လက်နက်ခဲယမ်း ရောင်းချတာတွေ ရပ်ထားဖို့ တောင်းဆိုသွားပါတယ်။
“လက်ရှိပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းဖို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့် ခြေလှမ်းတွေက ရှင်းပါတယ်။ ပထမက မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို လေးစားလိုက်နာရပါမယ်။ ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေကို ချက်ချင်းတာဝန်ကနေရပ်ဆိုင်းပြီး သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေအတွက်လည်း ဥပဒေအရ သူတို့ကို အရေးယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်ရှိလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့ နိုင်ငံမှန်သမျှလည်း စစ်တပ်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေအပေါ် အရေးယူမှုတွေ ပြီးစီးတဲ့အထိ လက်နက်ရောင်းချမှုအားလုံးတို့ကို ဆိုင်းငံ့ရပါမယ်။“
ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ ပြောသွားတဲ့ထဲမှာ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရပိုင်နဲ့ စစ်ဘက်ပိုင် သတင်းမီဒီယာ တွေကနေ ထုတ်လွှင့် ဖော်ပြနေတာတွေကို ထောက်ပြ ဝေဖန်သွားသလို အဲဒါတွေကို ရပ်ဖို့လဲ တောင်းဆိုသွားပါတယ်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့ တရုတ်သံအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လုပ်ဆောင်နေတာကို ချီးကျူးသွားသလို မြန်မာအစိုးရက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC အပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် နေတာကိုလဲ ကြိုဆိုတယ်လို့ပြောပြီး
“မွတ်စလင် လူဦးရေအများအပြား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးခိုလှုံတာကို စနစ်တကျ ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အတွက် ဒီနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေးနွေးပြောဆိုတာနဲ့ ဆက်သွယ်တာကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ အားပေး ထောက်ခံသင့် ပါတယ်။”
လက်ရှိအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာနဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာတဲ့နေရာမှာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရှိဖို့နဲ့ မျှမျှတတရှိဖို့ သက်ဆိုင်သူ တွေကိုရော ပြင်ပက ပတ်သက်နေသူတွေကိုပါ တောင်းဆိုပါတယ်လို့ ရုရှားသံအမတ်ကြီး Vasily Nebenzya က ရုရှားဘာသာ စကားနဲ့ပြောပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ စကားပြန်က ပြောပေးပါတယ်။
“အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သုံးစွဲပြောဆိုတာမှာ သိပ်ကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီခက်ခဲပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စကို အပြန်အလှန်လေးစားမှုပေါ်အခြေခံပြီး ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတာမှာ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရတွေကို လက်တွေ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စ အာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လို အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်မျိုးကိုမဆို၊ အခြေအနေကို မီးထိုးပေးမယ့် ဘယ်လိုအပြောအဆိုမျိုးကိုမဆို ဘယ်ဖက်ကမှ မလုပ်အောင် ကျနော်တို့ တားဆီးဖို့လိုပါတယ်။” လို့ ရုရုရှားသံအမတ်ကြီးက ပြောသွားပါတယ်။
ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကို မြန်မာအစိုးရကိုယ်စား တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်းက တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့ထဲမှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ စိုးရိမ်ချက်တွေကို နားလည်တဲ့အကြောင်း ဦးစား ပေးပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တခြားလူမျိုးစုတွေ ထိခိုက် သေကျေရတာ တွေကို ထောက်ပြသွားပြီး အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသွားပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ ကျန်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေက ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း ပြောဆိုတာကိုလဲ ကြိုဆိုကြောင်း ပြောသွားသလို –
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာမရှိဘူး၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုမရှိဘူးဆိုတာ ကျနော်အလေးထား ပြောလိုပါတယ်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုဆိုတာတွေဟာ သိပ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ စွဲချက်တွေဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတာကို ဥပဒေနဲ့အညီ အရင်သုံးသပ်တာမျိုး၊ တရားရုံးက ဆန်းစစ်လေ့လာတာမျိုးမလုပ်ဘဲ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့အမြင်ကို စိတ်ခံစားချက်က လွှမ်းမိုး စေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကျနော်တို့ခေတ်ရဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ်မှတ်ချက်စကား ဖြစ်သွားပါမယ်။”
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအားလုံး၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်အားလုံးကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း၊ စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ဆောင်တာမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမယ့် ပြဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီ အတိအကျ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ဖို့ ညွှန်ကြားထား ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောထားတာကိုလဲ ဦးသောင်းထွန်းက ထပ်ပြောသွားပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးသွားသူတွေကို ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အချိန်မရွေး စတင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဒီကိစ္စမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ အရင်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖူးသလို အခုလဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးသောင်းထွန်းက အလေးထား ပြောသွားသလို ကိုဖီ အာနန်ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့လုပ်နေတာကိုလဲ ပြောသွားပါတယ်။
အဆုံးမှာတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို ဦးသောင်းထွန်းက အထူးအလေးထား ပြီး ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နုနယ်သေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက် အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဒီမိုကရေစီ အခိုင်အမာ အမြစ်တွယ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်သာမက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ငြိမ်းချမ်း၊ တည်ငြိမ်၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင် တည်ဆောက်တဲ့နေရာ မှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းသာ လျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြဿနာကို ကျနော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် တခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။”
လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ အစိုးရ ကစီစဉ်ထားတာကို ဦးသောင်းထွန်းကပြောသွားသလို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့လဲ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ်ကြီး Masud Bin Momen ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေထဲမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ကျန်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အပြည့်အ၀ အကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ကုလသမဂ္ဂကကြီးကြပ်တဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဇုံ သတ်မှတ်ပေးဖို့ ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထွက်ပြေးသွားသူတွေကို ပြန်လည် စိစစ်လက်ခံရေးကိစ္စ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့သဘောထားကို ပြောသွားတာမှာတော့
“ဒီကိစ္စအတွက် နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေရှေ့မှာ ပူးတွဲ စိစစ်တာကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ပိုပြီး လိုလားပါတယ်။ နေအိမ်တွေကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သူတို့ရဲ့မူရင်းနေရာတွေဆီကို ဘေးကင်းစွာ၊ လုံခြုံစွာနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ပြန်သွားရသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာ ပြောခဲ့တာကို ဒီနေရာမှာ ကျနော် ပြန်ပြီး ကိုးကားပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီအကျပ်အတည်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြောင်းရင်းခံပြုတာဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်း ကိုလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ရှာဖွေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။”
အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောသွားကြတဲ့ သံတမန်တွေအကုန်လုံးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချီးကျူးပြောဆို သွားကြသလို နောက်ထပ်အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတာကိုလဲ ထောက်ပြပြောသွားကြပါတယ်။ သံတမန်အားလုံးနီးပါး ဘုံတူညီ စွာပြောသွားတာကတော့ တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့၊ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေ အကန့်အသတ်မရှိ ပေးခွင့်ပြုဖို့နဲ့ အိုးအိမ်စွန့်ထွက်ပြေးသွားသူတွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဘေးကင်းလုံခြုံဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်ပြန်ခွင့်ပြုဖို့ ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အာဆီယံ၊ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ကိုဖီ အာနန်ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကိုလဲ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အောက်တိုဘာလ အလှည့်ကျဥက္ကဌက ပြင်သစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌတာဝန်စယူတာနဲ့ ရခိုင်အရေး အကြံပေးကော်မရှင်ဥက္ကဌ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း Kofi Annan ကို ဖိတ်ခေါ် ပြီး ရခိုင်အရေး ထပ်ပြီး ပြောဆိုမယ့်အကြောင်း ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး François Delattreကလဲ ပြောသွားပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံထဲမှာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ငါးနိုင်ငံထဲက ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိကန်၊ အလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တွေထဲက အီဂျစ်၊ ကာဇက်စတန်၊ ဆီနီဂေါလ်နဲ့ ဆွီဒင် စုစုပေါင်း ၇ နိုင်ငံက တောင်းဆိုတာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် က မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို အခုလို အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဆွေးနွေးကြတာပါ။
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်၊ နယ်ခြားစောင့် ရဲကင်းနဲ့ စစ်တပ်စခန်းတွေကို မြန်မာအစိုးရက အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ARSA ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ပြီး တဲ့နောက်ပိုင်း တပ်မတော်က စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရာပေါင်းများစွာသောလူတွေ သေဆုံးတာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးတာ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်လာတာ စတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ပြောဆိုတာ တွေ မြင့်တက်နေချိန်မှာပဲ အခုလို လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေး တံခါးဖွင့်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးအမည် မပါဝင်လို့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဒုက္ခသည်များ ငြင်းဆန်
by rightsforburma | Sep 28, 2017 | Myanmar, NEWS
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် နေရပ်က စွန့်ခွာထွက်ပြေးပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသူတွေကို တာဝန်ရှိသူတွေက မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ လူမျိုးအမည် မပါဝင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုက္ခသည်တချို့က မှတ်ပုံတင်ဖို့ လက်မခံ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်လို့ AFP သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေက ဒုက္ခသည်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးတဲ့အခါ ကဒ်ပြားပေါ်က နိုင်ငံသားအဖြစ် ဖြည့်စွက်ရမည့်နေရာသာပါပြီး လူမျိုးအဖြစ် ဖြည့်စွက်ရမယ့်နေရာ မပါဝင်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြတာလို့ သိရပါတယ်။
အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒုက္ခသည် ၅ သိန်းနီးပါးကို မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပေးနေရာမှာ အခုထိ မှတ်ပုံတင်ပြီးသူ နှစ်သောင်းလေးထောင်လောက် ရှိတယ်လို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြားရဲ့ လူမျိုးနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖေါ်ပြဖို့ ဘင်္ဂလာေးဒ့ရှ် အစိုးရ က ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် ဒုက္ခသည်တချို့က နိုင်ငံသားဆိုတာထက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအဖြစ် ထည့်သွင်း စေချင်ကြတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိတစ်ဦးကတော့ ဒုက္ခသည်ကဒ်ပြားမှာ လူမျိုးအမည် မထည့်သွင်းတာဟာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီဖြစ်အောင် အစိုးရက ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီမှာ ကြားနာပွဲတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီဝင် လွှတ်တော်အမတ်တွေက သုံးသပ်ပြောဆိုကြသလို ကြားနာပွဲမှာ တက်ရောက် တင်ပြသူတွေကလဲ သူတို့သိရှိထားတာတွေကို အစီရင်ခံ တင်ပြကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ပြောပြပါမယ်။
အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီမှာ ၂ နာရီနီးပါးကြာ ကြားနာပွဲတခုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေတွေနဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ တက်ရောက်အစီရင်ခံသူတွေက အကျယ်တ၀ံ့ ပြောဆို မေးမြန်း တင်ပြခဲ့ကြတာပါ။
ကော်မတီဥက္ကဌ အောက်လွှတ်တော်အမတ် Ed Royce က ပြောသွားတာမှာ –
“ရိုဟင်ဂျာမူစလင်တွေနဲ့ တခြား လူနည်းစုတွေကို မြန်မာအစိုးရက အပြင်းအထန် ရက်ရက် စက်စက် ပြုမူနေတာ ခွင့်ပြုထားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးကိစ္စတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ရပါမယ်။ အကြမ်းဖက်အခြေအနေတွေကို ရပ်ပစ်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းတွေအကုန်လုံးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင် အမေရိကန်သမ္မတတွေလက်ထက်က ပြဌာန်းသွားတဲ့ ဥပဒေ တွေ၊ အမိန့်ကြေညာစာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာမှာ အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ The Heritage Foundation၊ အာရှရေးရာ လေ့လာမှုဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူး Walter Lohman က ထောက်ပြပြီး အမေရိကန်ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကိုတင်ပြတာမှာ နှစ်နိုင်ငံကြား စစ်ဘက်ဆက်ဆံ ရေး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် နောက်ထပ်မလုပ်ဖို့ အကြံပြု တင်ပြသွားပါတယ်။
“မြန်မာစစ်ဘက်ကို အကြံပေးဖို့၊ သင်ကြားပေးဖို့၊ လေ့ကျင့်ပေးဖို့ ကာကွယ်ရေးဌာနကို ခွင့်ပြု ထားတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ National Defense Authorization Act (NDAA) ပါ ပြဌာန်းချက်တွေ ကိုဖယ်ရှားဖို့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန် မက်ကိန်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေအတွက် အခြေခံချပေး ထားတဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် NDAA ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တွေကို ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က ဖျက်သိမ်း ပြီး နောက်ထပ် အရေးယူ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။”
မစ္စတာ Lohman အပါအ၀င် ကျန်တဲ့လူတွေ အကြံပြုတင်ပြသွားတဲ့ထဲမှာ စစ်ဘက်ချင်း ဆက်ဆံရေး မလုပ်ဖိ်ု့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပြန်ပြီးကန့်သတ်ဖို့၊ မြန်မာစစ်ဘက် တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်ဖို့၊ အထူး ဒဏ်ခတ်အရေးယူတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း SDN ထဲမှာ မြန်မာ စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်တွေကို ထည့်သွင်းဖို့ စသည်အားဖြင့် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုမျိုးစုံ ချမှတ်ဖို့ တင်ပြသွားတာတွေရှိပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ရိုဟင်ဂျာ ၄၀၀,၀၀၀ သိန်းကျော် ထွက်ပြေးသွားရတဲ့ အကြောင်း ရင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာမှာ မြန်မာစစ်တပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို တင်ပြသွားသူကတော့ Refugees International အဖွဲ့က လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူ Daniel Sullivan ပါ။
“ပထမဆုံးနဲ့ အဓိကအကျဆုံးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ စစ်ဘက်ဟာ ဒီပြဿနာမှာ တိုက်ရိုက် တာဝန်ရှိပါတယ။် ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ကြတာမှာ မြန်မာစစ်သားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီချိုးဖောက်မှုတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ အားအကောင်းဆုံးအနေ အထားမှာ ရှိနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။”
အမေရိကန်၊ Holocaust အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်၊ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ Simon-Skjodt ဌာနက အစီအစဉ် မန်နေဂျာ Andrea Gittleman ကလဲ ရခိုင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ဘက်မှာရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာပါ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကြားနာပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။
“တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပိုပြီးပါဝင်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်အရပ်သားတွေရဲ့ ထောက်ကူမှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် မကြာသေးခင်ကကျူးလွန်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေမှာ အဓိက လက်သည်က တော့ မြန်မာစစ်တပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လဲ လက်ရှိ အကြမ်းဖက်သံသရာကို အရှိန်လျှော့ချဖို့၊ မြန်မာ နိုင်ငံက လူနည်းစုတွေရဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို စစ်ဘက်ရန်ကနေရော ARSA လို အဖွဲ့မျိုး တွေရဲ့ရန်ကနေပါ အကာအကွယ်ပေးဖို့ တကယ်တမ်းတာဝန်ရှိသူကတော့ နိုင်ငံမှာ တကယ့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။”
ဒီကြားနာပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်ခဲ့ပေ မဲ့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးတော့ မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကို ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားသူကတော့ ဒီမိုကရက်ပါတီက အောက်လွှတ်တော်အမတ် Brad Sherman ပါ။
“မြန်မာသံအမတ်ကြီးကိုလဲ ကျနော် ဒီမှာ မိတ်ဆက်ပေးလိုပေမဲ့ သံအမတ်ကြီးက ဒီမှာ ရှိမနေ ပါဘူး။ သံအမတ်ကြီးသာ ဒီမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့် ထောင်ပေါင်း များစွာသောလူတွေ နိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးသွားရတဲ့အပေါ် ကမ္ဘာက ဘယ်လိုမြင်နေတယ် ဆိုတာကို သိသွားမှာပါပဲ။”
ကြားနာပွဲ အဆုံးသတ်ခါနီးမှာတော့ ပွဲကို အဓိကတာဝန်ယူကြီးကြပ်တဲ့ ကော်မတီဥက္ကဌတဦး ဖြစ်သူ၊ ရီပတ်ဘလီကန် အောက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Yoho က ဒီကြားနာပွဲကနေ ဆက်ပြီး တင်ပြသွားမယ့် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကို အခုလို ပြောသွားပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ ဒီကြားနာပွဲမှာ တင်ပြတာကနေထွက်လာမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေက တော့ Jade Act ကို ချက်ခြင်း ဖျက်သိမ်းဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးဖို့ တင်ပြထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၆၃ သန်း အကူအညီကို ဆိုင်းငံ့ထားဖို့၊ ဒါကို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေတောင် မသိသေးပါ ဘူး၊ အခုတော့သိပြီလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ အခုချက်ခြင်း အရေးယူလုပ်ဆောင်ရေး တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။”
ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်အခြေအနေတွေ၊ ဒုက္ခသည်အများအပြား ထွက်ပြေးနေရတာ တွေ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ်နေတာတွေ စသည်အားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှာ အထူးအာရုံစိုက် ပြောဆိုတာတွေရှိနေချိန်မှာပဲ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီမှာ ကြားနာပွဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။